Posted by ကိုမျိုးအောင် at 2:10 AM 1 comment:
၁၃၇၄ ခုနှစ် မဟာသင်္ကြန် SkyNet ရုပ်သံလိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ကြည့်ရန်
Posted by ကိုမျိုးအောင် at 5:53 AM No comments:
ကာတွန်း အော်ပီကျယ်..၏ ကာတွန်းအချို့
“ နှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းတွေကို စုစည်းခဲ့တာ သုံးအုပ်ရှိပြီ ။ အဲဒီစာအုပ် တွေထဲမှာ မပါဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းတွေထဲက တစ်ချို့ ကို ရွေးစု လိုက်တော့ ဒီ “ စတုတ္ထ အစု ” ဖြစ်လာတယ် ။ သက္ကရာဇ် တွေကို ပြန်ကြည့် လိုက်တော့ အများစုက ၁၉၉၀ ကျော်နှစ်တွေမှာ ရေးဆွဲ ခဲ့တာတွေ ။ ကာတွန်းလေးတွေ နည်းနည်းအိုနေပြီ ။ ခံစားမှုပျို နေသေးတယ် ထင်တာကြောင့် စာအုပ်အဖြစ် စုစည်းလိုက် ပါတယ် ” လို့စာအုပ် နောက်ကျောဖုံးမှာ ရေးထားတဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်း အော်ပီကျယ် ရဲ့စတုတ္ထအစု စာအုပ်မှ ကာတွန်းအချို့ ပါ ။
Posted by ကိုမျိုးအောင် at 12:36 AM No comments:
ကျနော်ကြိုက်လို့တင်လိုက်တာပါ..သရုပ်မှန်ကို..အဟုတ်တကယ်ခွဲခြားပြတဲ့...ဇာတ်လမ်းတိုလေးပါ မိုက်တယ်ဗျာ.....[BAN THAT SCENE] Just Ban it all !!! ဆင်ဆာဖြတ်ကြမယ်
There are many extra electricity mega watts in Burmese so that we have to sell it abroad!Maybe the most funny movie I have ever seen. Could not stop laughing from beginning to end.
သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း ရိုက်ကူးတင်ပြသော "အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်" ဇာတ်လမ်းတို ရုပ်ရှင်ကားမှ ဗိုလ်မှူးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သည့် (ဦး) ဇော်ဝင်းနိုင်နှင့် ဆင်ဆာအရာရှိအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သည့် (ဒေါ်) သန်းသန်းစိုးတို့အားအင်္ဂလန်မှအမည်မဖော်လိုသ
­ူ မြန်မာပရိသတ်တဦးက ငွေကျပ်တသိန်းစီ ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပရိသတ်မှ "လွတ်လပ်မှုအနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်" (The Art of Freedom Film Festival) အတွက်လည်း အလှူငွေ ကျပ်နှစ်သိန်း ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေနှင့် လှူဒါန်းငွေ စုစုပေါင်း ကျပ်လေးသိန်းကို ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေမှတဆင့် ကိုဇာဂနာ (ကိုသူရ) ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။
The Art of Freedom Film Festival လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ (ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့) ညနေ ၆ နာရီက တော်ဝင်စင်တာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက် ရှိရာ ပရိတ်သတ် အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကားဆုကို ဒါရိုက်တာ ဝိုင်း၏ "အဲဒီအခန်းဖြတ်" ဇာတ်ကားရရှိသွားပါသည်။
မဲပေးကြတဲ့ ပရိသတ် ၁၀၀၅၄ ဦးမှာ ၇၀၁၁ မဲ ရရှိပြီး ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဆု ကို ရရှိခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်စကားကို ( ၀ိုင်း )က ဒီလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ် ။
ရိုးရိုးလေးဗျာ ရွှေတွေ ကြယ်တွေလည်းမပါဘူး ။ ရိုးမှာပေါ့ လူထုကပေးတာကိုး ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
Posted by ကိုမျိုးအောင် at 8:45 AM No comments:
တကယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ်ဖြစ်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ကိုသာနိုးပြောတဲ့ အင်တာဗျူးလေးပါ
Posted by ကိုမျိုးအောင် at 8:00 AM No comments:
၁။ Spring Temple Buddha
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံး ရုပ်ပွားတော်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီး ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ အမြဲတမ်းလာကြတဲ့ အမြင့် (၁၂၈ )မီတာရှိတဲ့Vairocana ဗုဒ္ဓလို့ အမည်ရတဲ့ ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပါတဃ်။ ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ ( ၂၅ )မီတာမြောက်မှာ Jiuhua တောင်ကြီးရှိပြီး ဘာသာရေးရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုအနေဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတဃ်။
ဒုတိဃအမြင့်ဆုံး ရုပ်ပွားတော်ကလည်း ဗုဒ္ဓ ကို ကိုဃ်စားပြုထားတာပါပဲ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ရှိကာ လှပသပ္ပာဃ်စွာ တည်ရှိနေပြီး ချီးကျူးစရာကောင်းလှတဲ့ဗိသုကာပညာရပ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး (၁၁၆)မီတာမြင့် မားပါတဃ်။ ရုပ်ပွားတော်ပာာ ဒါတွေမပါနဲ့ ကြည့် ရင်တောင်မှာ လှပသပ္ပာဃ်နေပါတဃ်။ လေးကွန်းစတြာလို့ အမည်ရပြီး (၂၀၀၈)ခုနှစ်တုန်းကပဲ တည်ဆောက်တာပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတဃ်။ ဒီရုပ်ပွားတော်ကို ဗုဒ္ဓကိုဃုံကြည်ကိုးကွဃ်ဆည်း ကပ်နေသူတွေကနေအလေး သမှုပြုမှုနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတဃ်။
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကနေ အာရှကို တကဃ်လေးစားဖို့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိနေပါပြီဗျာ ။ တတိဃအမြင့်ဆုံး ရုပ်ပွားတော်ကလည်း အာရှတိုက်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာတည်ရှိတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒါပာာလည်း ဗုဒ္ဓကို ကိုဃ်စားပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားလှတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးပာာ Ushiku လို့ အမည်ရပြီး ( ၁၁၀)မီတာမြင့်မားပါတယ်။ (၄,၀၀၀ )တန် အလေးချိန်ရှိပြီး အပြင်မှာတကဃ် မတွေ့ ဘဲနဲ့ တော့ ယုံကြမှာမပာုတ်ပါဘူး ။ ဘယ်လောက် အရွဃ်အစားကြီးတဃ်ဆိုတာ စိတ်ကူးကြည့် လိုက်ပါ ပန်းပုလက်ရာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဦးခေါင်းတော်ပာာ အမေရိကန် ၊ နဃူးဃောက်မြို့ ကလေဘာတီရုပ်ထုရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ရှိပါတယ်။
၄။Great Buddha of Thailand
ဘုရားလာဖူးသူတွေရဲ့(၉၂)မီတာအမြင့်မှာရှိနေပြီး ကြီးမားလှတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပာာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပွားတော်ကြီးပြီးဖို့(၁၈)နှစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး အခုဆို ဆောက်လုပ်တာပြီးဆုံးသွားတဲ့ ကြည်ညိုစရာကောင်းလှတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးကို အပြည့်အ၀ဖူးမြော်လို့ ရပါပြီ။
၅။ Ling Shan Grand Buddha
တရုတ်ကတော့ မြင့်မားလှတဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေ ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ကြီးမားလှတဲ့လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တို့ ရဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လက်ဖ၀ါးဖြန့်ထားတဲ့ပုံစံ တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြီးမားလှတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပာာ Lingshan( လင်းရှန် ) ကောင်တီမှာတည်ရှိကာ (၈၈)မီတာမြင့်မားပြီး ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံးရုပ်ပွားတော်တွေထဲမှာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုမျိုးအောင် at 1:11 AM No comments:
ယနေ့လို ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကိရိယာ တန်ဆာပလာမပါပဲနဲ့ လူတွေအတွက် အသေးငယ်ဆုံး တံတားလေးတစ်ခု တည်ဆောက် မယ်ဆိုရင်တောင်မှ လွယ်ကူလှတဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ သဘာဝတရားကြီးက ကျွန် တော် တို့ကို အံ့သြဖွယ်ရာတွေ ဆောင်ယူလာပေးပါတယ် ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ မိုးသစ်တောတွေထဲမှာ သဘာဝ အ လျောက်ရှင်သန်ကြီးထွားနေတဲ့ တံတားတစ်စင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
အိန္ဒိယမှ Cherraphunji , Meghalaya မှာ သဘာဝအလျောက် ရှင်သန်ကြီးထွားနေတဲ့ သက်ရှိတံတားရဲ့ ပုံတွေ ကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် ။ Ficus elastica ဆိုတာကတော့ သဘာဝအလျောက် ဒုတိယအမြစ် (secondary roots) တွေကို ပွားများစေတဲ့ အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး အဲဒီအပင်တွေ စုပေါင်းခြင်းအားဖြင့် တံတားတစ်စင်း ဖြစ်ပေါ် နေတာကို အံ့သြဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ် ။ အချို့သော လူမျိုးစုတွေဟာ မိုးရသီ ရေလွှမ်းမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ ရတဲ့အခါ ဒီအပင်တွေကို အသုံးပြုပြီး တကယ့်တံတား ဖြစ်အောင်လည်း ပြုလုပ်ကြပါသေးတယ် ။
Posted by ကိုမျိုးအောင် at 12:52 AM No comments:
၁၃၇၄ ခုနှစ် မဟာသင်္ကြန် SkyNet ရုပ်သံလိုင်းမှ တိုက်ရ...